नेपाली फुटबल जोगाउन खेलाडीलाई नीराजनको आग्रह | Hamro Khelkud
नेपाली फुटबल जोगाउन खेलाडीलाई नीराजनको आग्रह
मंगलबार, चैत १३, २०७४
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालमा फुटबल र क्रिकेट सबैभन्दा बढी लोकप्रिय खेल मानिन्छ । सम्बन्धित खेलका विषयमा फुटबल भन्दा क्रिकेट खेलाडी पटक पटक बोलेका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विषय देखि खेलाडीको सुरक्षित भविष्यलाई लिएर राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्कासहित अन्य खेलाडीले पटक पटक सञ्चारमाध्यम सामू आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
त्यसको दाँजोमा फुटबल खेलाडी कमै बोल्ने गरेका छन् । यद्दपी पूर्व खेलाडीले भने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाली फुटबलको अवस्थाका बारेमा समय समयमा बोल्ने गरेको पाइन्छ । मौन रहने फुटबल खेलाडीका बीचमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व मिडफिल्डर नीराजन खड्का भने समय समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार राख्दै आएका छन् ।
रुस्लान थ्री स्टार क्लबका कप्तान समेत रहेका नीराजनले यसपटक फेसबुकमार्फत नेपाली फुटबललाई बचाउन आग्रह गरेका छन् । एन्फाको बुधबारका लागि तय भएको केन्द्रिय समितिको निर्वाचन स्थागित भएको समयमा उनको यस्तो भनाई आएको छ । उनले फुटबल जोगाउन खेलाडी एक जुट हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
के छ नीराजनको स्टाटसमा
हाम्रो देश मात्रै होला जहाँ खेलाडीको लागि भनेर अनेक थरी मारामार पोलिटिक्स अनि के के के के गरिन्छ । तर, फर्केर हेर्दा खेलाडी नै पीडित, फ्युचर अगाडि हेर्दा झन अन्धकार छ । आफ्नो करियर, आफ्नो फेमेली, अध्ययन र आफ्नो बडी नै खेल जीवनमा लगाएपनि सुन्ने वाला कोही छैन ।
अफिसियलहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो र बढेको बढ्यै, खेलाडीहरु विदेशिनु बाध्य ? हामी नबोलेरै, सहेर बसेर नै हामी पीडित भाको हैन र ? बोल्यो कि पोल्यो भन्ने डर, राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा, अरु धाको खेलाडीको भ्वाइसको भ्यालु हुन्न, न त वास्ता नै छ । जाम भाई विदेश भन्यो, हिड्यो झोला बोकेर । परिवार पनि हेर्नु छ, यार कसले दिन्छ खान ? कसले लिन्छ यो फुटबलको टेन्सन । धिक्कार छ । यस्तो छ नेपाली फुटबल सिनारियो । मोफसलले टिकेको छ हजुर नत्र अझै कति दाजु भाई विदेश लागिसक्थ्यो, अझै कति प्रोसेस मै छ ।
खेलाडीलाई जिताउनुस्, प्रोडकट गर्नुस्, बाँच्ने खाने वातावरण बनाउनुस । धेरै भयो भाषण र यो पैसा र पावरको चलखेल । उनीहरुले केही प्रभाव पार्ने वातावरण बनाउनुस् । भविष्य सुनिश्चित छ उनीहरुको । प्रभावमा पर्ने र मर्ने त खेलाडी नै हुन् । सो प्लिज खेलाडीहरु एकजुट हुनुपर्छ अब हामी, हाम्रो ब्युटिफुल गेम हामीले नै बचाउनुपर्छ । जागौं, जय खेलाडी, जय फुटबल, जय नेपाली फुटबल ।